‎Siouxland Public Media News: Somali on Apple Podcasts
News in Somali for the Siouxland region. Produced in partnership with the Mary J Treglia Community House .
Siouxland Public Media News: Somali Halima Osman
Adeegga Cimilada Qaranka ayaa sheegaya in 5.7 inji ay ku dhacday garoonka diyaaradaha ee Sioux Gatew
Adeegga Cimilada Qaranka ayaa sheegaya in 5.7 inji ay ku dhacday garoonka diyaaradaha ee Sioux Gateway. Si kastaba ha noqotee, meelaha qaar ee Siouxland kaliya waxay heleen qadar yar oo baraf ah. Meelaha kale ee Nebraska iyo Iowa waxay heleen wax ka badan cag baraf ah. Dhowr dugsi ayaa xilli dambe bilaabay ama la wada joojiyay dhammaantood, oo ay ku jiraan Sioux City iyo South Sioux City. Qaar ka mid ah adeegyada deegaanka ayaa saameyn ku yeeshay qashin aruurinta oo dib loo dhigay hal maalin
Duufaan xoog badan oo jiilaal ah ayaa la filayaa inay buste ka dhigto qayb ballaaran oo ka mid ah ba
Duufaan xoog badan oo jiilaal ah ayaa la filayaa inay buste ka dhigto qayb ballaaran oo ka mid ah bartamaha Mareykanka oo ay la socdaan baraf iyo dhibaatooyin safarka. Adeegga Cimilada Qaranka ee ka baxsan Sioux Falls ayaa sheegaya in barafka culus badankiisa uu sii joogi doono koonfurta magaalada Sioux City. Sioux City waxaa la sii saadaaliyay inay kacayso ilaa 5 inji Iskuulada qaarkood ayaa shaqada ka eryay galinkii hore ee maanta, oo ay ku jirto Koonfurta Sioux City, halkaas oo ay ka jirto
Gobolka Iowa wuxuu ilaa saaka soo sheegayaa in kabadan 1300 oo kiis oo cusub oo coronavirus ah.
Gobolka Iowa wuxuu ilaa saaka soo sheegayaa in kabadan 1300 oo kiis oo cusub oo coronavirus ah. Gobolka ayaa ka warbixinayay dhimashada 33 COVID-19, wadar ahaan 4,478 oo dhimasho ah tan iyo markii cudurku ku yimid Iowa, sida laga soo xigtay websaydhka coronavirus.iowa.gov . Waxaa jiray 310,596 wadarta kiisaska la xaqiijiyay ee coronavirus ee Iowa. Waxaa jira 450 qof oo la seexiyay cusbitaalada la xiriira coronavirus. Heerka wanaagsan ee gobolka oo dhan waa 10.1%. Caafimaadka Degmada Siouxland
Dhammaan dadka jira 65 iyo wixii ka weyn waxay ku jiraan Iowa mawjadda xigta ee tallaallada COVID-19
Dhammaan dadka jira 65 iyo wixii ka weyn waxay ku jiraan Iowa mawjadda xigta ee tallaallada COVID-19, oo bilaabmi doonta Febraayo 1. Gov. Kim Reynolds wuxuu leeyahay tierkan labaad wuxuu ugu dambeyn tallaali doonaa in ka badan 530,000 Iowans. Bixinta wajiga labaad waxay talaal siin doontaa kooxaha mudnaanta sare leh sida shaqaalaha muhiimka ah ee safka hore, jawaabayaasha koowaad, iyo macalimiinta. Laakiin Reynolds wuxuu sheegay in gobolku uusan u furi karin tallaalada dhammaan Iowans weli.
Wafdiga koongareeska waxay kaqeybgaleen caleemo saarka maanta madaxweynaha Joe Biden Washington.
Wafdiga koongareeska waxay kaqeybgaleen caleemo saarka maanta madaxweynaha Joe Biden Washington. Afhayeen ayaa sheegay in Wakiilka Randy Feenstra ee Hull, uu si dhow ula socday dhacdooyinka maanta, laakiin wuxuu sii joogay Iowa si uu uga qeyb galo gabadhiisa ciyaarta kubbadda koleyga ee habeenki xalay ee Jaamacadda Dordt. Wuxuu ku laaban doonaa Washington marka uu Goluhu dib u furmo berri. Saraakiisha caafimaadka bulshada ee Iowa ayaa soo daabacay 62 qof oo dheeraad ah Arbacadii iyada oo wadarta
NEWS 1.19.21: SOMALI
Macallimiinta Nebraska iyo shaqaalaha kaashka cuna waxay ka walwalayaan inay waqti dheer ku qaadanayso shaqaalaha muhiimka ah inay helaan tallaalka COVID-19 hadda kooxda xigta ee dadka la tallaalayo waxaa ku jira qof kasta oo 65 iyo wixii ka weyn ah. Hogaamiye urur waxbarasho ayaa sheegay in macalimiinta ay ka niyad jabeen maqalka in aysan toogan doonin ilaa iyo Maarso ugu horayn. Qaar ka mid ah bixiyeyaasha xanaanada caafimaadka ee South Dakota waxay ka digayaan dadka nugul ee ku nool miyiga in